Triptorelin Acetate Injection / Powder: Aiza no ahazoako azy? - Phcoker
2. Inona no ampiasain'i Triptorelin Acetate?
3. Ahoana ny fiasan'ny Triptorelin Acetate anao?
4. Ahoana no tokony hampiasako Triptorelin Acetate?
5. Inona no tokony ho fantatrao alohan'ny fampiasana azy?
7. Ny vokatry ny fampiasana Triptorelin Acetate
8. Misy marina ve ny Triptorelin azoko?
9. Aiza no ahazoako ny Acetate Triptorelin?
Ny Triptorelin Acetate koa dia fantatra amin'ny hoe Triptorelin Acetate140194-24-7 dia molekiolan'ny sela organika misy mpanodana sekoly ambaratonga faharoa sy fanampiny ao amin'ny atoma-nify karbonika, amin'ny hoe tsotra kokoa, midika izany fa misy atôma metaly maro, vondrona miasa miaraka amin'ny karbona atoma ao amin'ny rafitra simika. Amin'ny ankapobeny, ny dikan'ny hoe 'Organic' dia midika hoe atomôma karbôna ny molecule ho atomika afovoany. Ny votoatin'ny organika rehetra dia misy atomôma atomika ary izany no mahatonga ny karbaona ho lohalaharana eo amin'ny fiainana.
Ny Triptorelin Acetate dia ampiasaina matetika ho toy ny zava-mahadomelina ary koa ho an'ny fampiasana simika ao amin'ny laboratoara. Ny fampiasana ny zava-mahadomelina dia tena zava-dehibe indrindra. Ny Acetate Triptorelin dia mora miteraka ary manana farafahakeliny mpitrandraka ambany kokoa izy raha ampitahaina amin'ny tahan'ny akoan'ny rano. Manana fehezan-tsimika ao amin'ny C66H86N18O15 ary volavolan-taolam-pampandrosoana 1311.49 isam-bolana. Ireo mpivarotra na mpidoroka zava-mahadomelina koa dia mety mampiasa ny teny hoe decapeptyl, gonapeptyl, sns, izay midika hoe Triptorelin Acetate. The fampiasana Triptorelin Acetate Ny zava-mahadomelina dia ampiasaina mba hanasitranana ny homamiadan'ny prostateur (mifandraika amin'ny androbe amin'ny andrin-tsokajy eo amin'ny rafitra fitondran'ny lahy). Tsy vitan'ny kansera fa ampiasaina amin'ny dingana avo lenta amin'ny hormone regulation, testosterone mifehy sns. Fantatra ny fampiasana ny Triptorelin Acetate na ny Triptorelin Injection, Tena mety tena mahasoa amin'ny tontolo ankehitriny. Ny mpametaveta Acetate Triptorelin dia manoro hevitra ihany koa fa tokony handray ny dokotera ianao alohan'ny handraisana ny fanafody.
Triptorelin Acetate140194-24-7 no tena fantatra amin'ny anarana hoe Triptorelin fanodinana Trelstar. Tena manampy amin'ny fitsaboana kanseran'ny prostaty ny fitsaboana triptorelin. Ny fitsaboana triptorelin koa dia ampiasaina mba hifehezana ny hormones amin'ny ankizy; Ny tranga fampiasa dia ny hoe rehefa mazoto mivoatra ny zaza iray ary mivoaka haingana ny hormones alohan'ny handehanany mankany amin'ny ambaratonga voalohany voalohany, dia ampiasaina hampihenana ny tsiaron'ny hormone ny fitsaboana Triptorelin. Ity fanafody ity dia eo ambanin'ny fanasokajiana Gonadotropin mamoaka hormona abbreviated as GnRH. Tena manampy amin'ny fanaraha-maso ny ankizy amin'ny haingana kokoa noho ny mahazatra ny fitomboan'ny firaisana ara-nofo. Amin'ny teny tsotra kokoa, ny fitsaboana Triptorelin dia ampiasaina mba hampihenana ny fisintonana tafahoatra amin'ny famerenana amin'ny fitsapana. Testosterone dia hormone izay tompon'andraikitra amin'ny lehilahy lahy sy vavy. Maro koa ny fampiasana izay mety hanoro anao ny dokotera amin'ny fiorenanao. Tsy maintsy mitandrina ny dosage satria mety tsy ho toy ny fomba mahomby amin'ny zava-manan'aina rehetra ny zava-mahadomelina, ny tsiranoka dia tokony ho hita mibaribary indrindra raha vao manomboka mampiasa ny zava-mahadomelina ianao.
Ny Triptorelin Acetate koa dia ampiasaina mba hanasitranana ny homamiadana amin'ny vehivavy. Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy, tsy nisy teny manokana voalaza Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy amin'ny teny esperanto Ohatra tsy ampy amin'ny teny esperanto Tadiavo Ελληνικά Français English Aza adino ny manara-maso ny fitsaboana tsy tapaka amin'ny vatanao amin'ny fampiasana ny fitsaboana ary ny karazana tsy fetezana rehetra dia tsy maintsy lazaina amin'ny dokotera alohan'ny hanamafisanao azy ary manomboka mampiseho fiantraikany ratsy hafa.
Ny fampidirana dia manomboka ny asany amin'ny alàlan'ny mandeha amin'ny arteries ary manala ireo hormones mitombo amin'ny fiterahana toy ny testosterone sns. Ny fihetsika mikrôbyolojika momba ny hormones sy ny hormone-release organ dia tsy mety ho mampidi-doza fa mbola miankina amin'ny dosage ny zava-mahadomelina sy ny tsimatimanota amin'ny maha-olombelona. Amin'ny ankapobeny, ny dosage dia tsy maneho ny vokatra fa ny dosie manokana omen'ny dokotera dia hanampy amin'ny fitomboan'ny fandrosoana.
3. Ahoana no Triptorelin Acetate work amin'ny anao?
The Triptorelin injection (Trelstar), ny fihinanana rongony dia mihatra amin'ny sela androngo ary manala ireo sela homamiadana. Raha ny homamiadan'ny prostaty nandroso, dia midika izany fa niparitaka tamin'ny taova hafa ny homamiadan'ny prostate. Ny sela kanseran'ny prostata dia mandalo amin'ny rafi-pandinihanao amin'ny ratrao, taolana sy bala koa amin'ny tranga sasany. Triptorelin Acetate eto dia manampy amin'ny fanesorana tanteraka ny sela rehetra voan'ny kansera, Triptorelin Acetate manampy amin'ny homamiadana fa amin'ny firy ny fiankinan-doha amin'ny fiankinanao sy ny tsy fahampiana.
Raha manomboka manara-maso ny fihenan'ny hormones ny dokotera, dia tokony ho toy ny asa atao Triptorelin Acetate izany.
Raha mitsahatra ny fijerena ny fiparitahan'ny sela voan'ny kansera, dia tokony hiasa ny Triptorelin Acetate
Raha toa ianao ka manomboka mitandrina ny fanovana eo amin'ny vatanao, dia tokony ho toy ny asa atao Triptorelin Acetate izany
Ao amin'ny simpler terms Triptorelin Acetate dia toy ny fanafody toy ny fitsaboana hafa rehetra azo amidy, miasa amin'ny alàlan'ny fanatontosana ny faritra voakasika ao amin'ny vatanao ary mivoatra amin'ny fitsaboana. Tokony ho fantatrao tsara indray ny dosage indray ary ny fe-potoana eo amin'ny fanafody tsirairay.
Misy ihany koa ny valin'ny Triptorelin Acetate fanadihadiana ao amin'ny aterineto izay mety hanazava lalina. Ny mpamorona ny Triptorelin Acetate dia mamoaka ny asa fohy momba ny pejy fanampiana amin'ny vokatra.
4. Ahoana no tokony hampiasako ny Acetate Triptorelin?
Triptorelin Acetate (140194-24-7) dia ampiasaina amin'ny fikarakarana ny homamiadana (homamiadan'ny prostate) sy ny fifehezana hormonina. Ny dokotera Triptorelin Acetate dia omen'ny dokotera ho endriky ny tsindrona, matetika, ny fampidirana dia indray mandeha isaky ny 4-herinandro (mety hiankina amin'ny fahasalamanao sy ny tsy fahazakana izany). Tokony hitandrina amin'ny dosage ianao mba hisorohana ny vokatra hafa tsy ilaina. Ho tombontsoanao, manoro hevitra ny hanisy marika ny daty ao amin'ny kalandrie aho ary mitondra tsimokaretina Triptorelin Acetate ao anaty dosie tsara ho an'ny vokatra tsara indrindra. Ny fanakanana ny urine dia ny soritr'aretina mahazatra rehefa mampiasa io fanafody io. Amin'ity tranga ity dia tokony hifantoka amin'ny dokotera ianao ary tokony hiara-hiasa izany miaraka amin'ny fandrindrana anao. Na izany aza, izany dia ho an'ny roa herinandro voalohany. Ny fihenan'ny otrikaretina dia mety ho marary vitsivitsy amin'ny fampiasana an'io zava-mahadomelina io, saingy tsy maintsy lazainao amin'ny dokotera raha mbola mitombo ny fanaintainana. Na dia tsy misy fiantraikany ratsy eo amin'ny lafiny mampidi-doza aza, dia tsy misy maharatsy ny mipetraka amin'ny toerana azo antoka raha manandrana fanafody vaovao. Aza manahy loatra koa, ny fitsaboana dia mahasalama anao ary manana fanohanana tsy tapaka amin'ny dokotera ianao. Amin'ny fotoana rehetra mandritra ny fotoam-panafody, aza misalasala miresaka amin'ny dokoteranao momba ny olana rehetra ao amin'ny fanafody. Ny fampiasana dia hamariparitan'ny manam-pahaizana manokana anao ary manoro hevitra anao amim-pitiavana ianao mba tsy hanamaivana ny tahan'ny fanafody.
Ny ankamaroan'ny Triptorelin Acetate dia ampiasain'ny olona mijaly amin'ny homamiadan'ny prostate na olana mitombo. Tokony hahalala izy ireo fa afaka manasitrana ny aretina raha toa ka mahasalama ny fanafody izy ireo. Tsy maintsy mandinika matetika ny dokotera / manam-pahaizana manokana momba ny fiantraikany eo amin'ny fiaraha-monina na ny soritr'aretina izy ireo indraindray, indraindray dia mety hiteraka olana goavana ny tsy fahampian'ny vokatra hafa. Ireo zavatra ireo dia tokony hokarakaraina alohan'ny hampiasana ity zava-mahadomelina ity ho fanafody. Ny marary ihany koa dia tokony hitazona ao an-tsainy fa tsy hanaisotra tanteraka ny homamiadana ny tsimokaretina Triptorelin Acetate indray mandeha, Manakana ny hormones izay manakana ny fitomboan'ny sela homamiadana. Ity fanafody ity dia tsy manary ny homamiadana ao amin'ny vatanao; Manasitrana amin'ny fomba mivoatra sy tsy miova izy raha tsy mamela azy hitombo. Tokony hikaroka koa ianao Triptorelin Acetate fanamarinana. Na dia misy prescribed aza, dia tsy misy maharatsy ny fitadiavana ny valin'ny Triptorelin Acetate ao amin'ny aterineto.
Ny dosage Triptorelin Acetate dia tsy mitovy amin'ny fahasalaman'ilay olana sy ny fahasalaman'ny marary. Ny dosage Triptorelin Acetate koa dia miankina amin'ny tsy fahampian'ny marary.
Volana Dosagem 1
Triptorelin injection na Trelstar dia zava-mahadomelina tena mahomby raha toa ka azo atao tsara ny fanafody fanafody.
Ho an'ny fanafody mahavotra iray volana iray, ny Trelstar dia soso-kevitra ny hapetraka ao 3.75mg amin'ny rano XMLXDXX dia azo ampiasaina amin'ny tsindrona. Izany dia hitohy mandritra ny iray volana. Io dia tokony ho fampidiran-dra ny fianarana. Ny rano 2mg Triptorelin Acetate + 3.75ml dia hiasa ho toy ny peptide fototra. Io dosage io dia mivezivezy amin'ny ra ao amin'ny arteries ao amin'ny tavy ary mampihena ny hormones ny tahan'ny vokatra.
Ity dosage ity dia tsy maintsy atao amin'ny fampiasana angom-panodinana 21 na rafim-pamindram-bola tokana.
Volana Dosagem 3
Ho an'ny famonoana fanafody maharitra telo volana, ny Trelstar dia soso-kevitra ny hametraka dosie amin'ny 11.25mg amin'ny rano XMLXXXXX volo toy ny ao anaty tsindrona. Izany dia hitohy isaky ny telo volana. Io dia tokony ho fampidiran-dra ny fianarana. Ny rano 2mg Triptorelin Acetate + 11.25ml dia hiasa ho toy ny peptide fototra. Io dosage io dia mivezivezy amin'ny ra ao amin'ny arteries ao amin'ny tavy ary mampihena ny hormones ny tahan'ny vokatra. Ity dosage ity dia tsy maintsy atao amin'ny fampiasana angom-panodinana 2 na rafim-pamindram-bola tokana.
Volana Dosagem 6
Ho an'ny famindrana fanafody maharitra enim-bolana, ny Trelstar dia soso-kevitra ny hapetraka ao 22.5mg amin'ny rano XMLXXXml voadio toy ny amin'ny fampidirana. Izany dia hitohy enim-bolana. Io dia tokony ho fampidiran-dra ny fianarana. Ny rano 2mg Triptorelin Acetate + 22.5ml dia hiasa ho toy ny peptide fototra. Io dosage io dia mivezivezy amin'ny ra ao amin'ny arteries ao amin'ny tavy ary mampihena ny hormones ny tahan'ny vokatra. Ity dosage ity dia tsy maintsy atao amin'ny fampiasana angom-panodinana 2 na rafim-pamindram-bola tokana. Triptorelin Acetate dosage dia afaka miovaova toy izany ary ny tsara kokoa ho entina raisina ny toro-hevitra momba ny dokotera.
Azonao ampiasaina ny Triptorelin Acetate amin'ny fotoana mahamety izany. Fa tsy maintsy ampiasainao izany aorian'ny fanadihadiana momba ny dokotera nahazo alalana ary tsy aorian'ny filazany anao io fanafody io.
Rehefa manomboka mampiasa ny fanafody Triptorelin Acetate ianao, indrindra rehefa manomboka mampiasa io fitsaboana io ianao dia mety hampitombo ny hormones manokana izany, izany no fepetra mitovy amin'ireo fepetra izay raisina. Na izany aza, tsy tokony ho olana izany fa misy koa ny fiantraikany ratsy hafa izay tsy maintsy atao mora foana. Ny fanakànana ny urine, ny fanondrahana urine sy ny ra ao amin'ny fanadiovana dia ny sasany amin'ireo fiantraikany goavana toy ny Trelstar miresaka momba ny faritra prostaty. Izany koa dia mitranga noho ny fanjavonana ary dia ho toy ny vatana raha ny vatanao no manorina ny rafitra immune ho an'ny zava-mahadomelina vao nampidirina. Mpanazatra triptorelin Acetate dia tsy misy ifandraisany amin'ny vokatra hafa.
Na izany aza, io fitsaboana io dia tsy tokony omena vehivavy bevohoka satria mety hisy fiantraikany ratsy eo amin'ny zaza izany.
Triptorelin Acetate dia miteraka fihenan'ny hormones, Ary koa ny Triptorelin Acetate dia miteraka fihenana amin'ny fiparitahan'ny kansera. Mety misy ifandraisany amin'ny iray amin'ireto valan'aretina Triptorelin Acetate ireto.
Tsara kokoa ny mifandray amin'ny dokotera avy hatrany raha mahita ny iray amin'ireto valan'aretina Triptorelin Acetate ireto ianao:
Mitebiteby tsy tapaka ka miteraka ny tenda mangatsiaka sy maina ary miteraka kohaka
Mionona amin'ny alahelo mahatsiravina
Ny aretim-pivalanana sy ny famadihana.
Ny fanaintainana na ny fanaintainana ara-batana amin'ny faritra voapetraka
Mitombo ny tahan'ny fo amin'ny avo avo lenta avo lenta sy siramamy
Tsy afaka ny ho mavitrika, tsy mitongilana sy tsy fahita firy
Ny fanaintainana indray ary ny fahalemen'ny hozatra
Mihena ny fitomboan'ny vatana
Ny lela tsy mahatakatra ny tsirony
Mofomamy manitra amin'ny fofona
Ny hafanana dia mamirapiratra ary mampitombo ny hafanana amin'ny vatany
Herisetra sy fahasosorana
Ireo efitrano mampihetsiketsika Triptorelin dia ny ankamaroan'ny vokatra hafa fa tsy ny lisitra feno. Ny hafa mety hitranga dia miankina amin'ny toe-javatra hafa. Ampirisihina ianao mba hiambina sy hampita ny dokotera amin'ny fanampiana fanampiny.
Na dia mandray an'io fanafody io aza ianao, ny fitsaboana dia mandalo amin'ny vatana mangatsiaka toy ny ra, urine ets. Tsara homarihina fa tsy tokony hikasika ny iray amin'ireo rano ireo farafaharatsiny mandritra ny ora 48 ny marary mandalo ny fanafody. Ny ganetikao (ho an'ny mpikarakara) dia ilaina amin'ny fampiasana ny fanafody.
Tsy maintsy lazainao amin'ny dokotera ny fanafody misy anao amin'izao fotoana izao satria ny Triptorelin Acetate dia mety hihetsika amin'ny zava-mahadomelina hafa mety tsy ho tsara indrindra amin'ny fitsaboana.
Ny Triptorelin Acetate dia mety aminao raha toa ianao mijaly noho ny olana hormona. Triptorelin Acetate dia azo ampiasaina amin'ny olona rehetra izay manana olana raha tsy hoe vehivavy bevohoka. Ankoatr'izay, tsy maintsy raisinao ny dokotera mba handinika ny fanafody mba hahafantarany tsara ny momba ny vatanao. Ny olana ara-pahasalamana rehetra dia tsy maintsy resahina miaraka amin'ny dokotera aloha ary tsy mampitaha ny tenanao amin'ny hafa mandeha amin'ny fanafody mitovy, samy manana ny fiarovana sy ny fihinanana azy ireo ianao, tsy mitovy ny an'ny tsirairay. Triptorelin Acetate dia vokatra amin'ny fanasitranana, ary raha ianao no maniry izany dia mety aminao izany. Triptorelin Acetate vovoka na Trelstar, Na dia mety ho somary misafotofoto aza izany. Triptorelin Acetate poids dia mora kokoa noho ny fanindroany. Saingy ny vokatra dia nahitana vokatra tsara kokoa raha ampitahaina amin'ny vovony Acetate Triptorelin.
Azonao atao ny mividy Triptorelin Acetate amin'ny fivarotana zava-mahadomelina voamarina araka ny prescriptions. Afaka mitsidika sampana iray ianao Phcoker mba hahazoana ny Triptorelin Acetate amin'ny vidiny sarobidy be. Tandremo mandrakariva ny marika sy ny daty fandaniana alohan'ny hividiananao Triptorelin Acetate.